customer တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင် ကူညီပေးမယ ဘက်စုံသုံး software ကိုရယူလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ Customer Service Team အတွက် အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မယ့် CRM software ကို အလိုရှိနေပါသလား။ Signify မှ သင့်ရဲ့ ဖောက်သည်သုံးစွဲသူများကို သင်ဝန်ဆောင်မှုပေးရာမှာ အကူအညီပေးမယ့် CRM Software ကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
သုံးစွဲသူ ဘက်စုံသုံး ဆော့လ်ဝဲ ရယူပါ
Customer များနှင့် ဆက်သွယ်သည့်အချက်အလက်များ၊ အရောင်းမှတ်တမ်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ marketing offer များကို အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် မြင့်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ post-it note မလို excel ဖိုင် မလိုတော့ပါဘူး။
Customer များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း
သင့်ထံတွင် customer နှင့် ဆက်သွယ်ထားသည့် မှတ်တမ်းများရှိနေခြင်းကြောင့် သင့်အနေဖြင့် ဘာပြောရမလဲ၊ ဘာကို ကမ်းလှမ်းရမလဲကို အလွယ်တကူသိပြီး customer များကို စိတ်ကျေနပ်မှုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Customer အကြောင်း နားလည်မှုအပြည့်အဝဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အလိုအလျောက် ပြီးမြောက်အောင် အချိန်တိုအတွင်းလုပ်ဆောင်ပြီး ယခင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဖူးသော နည်းလမ်းများဖြင့် အလုပ်များစွာ ပိုမိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။
အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုအတွက် နည်းလမ်း
သင့်အဖွဲ့ အရည်သွေးကို PDCA ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခြင်း(Plan-စီစဉ်ပါ။ > Do-လုပ်ဆောင်ပါ။ > Check-စစ်ဆေးပါ။ > Act-လိုအပ်သည်များကိုဖြည့်ဆည်းပါ။)
Customer နှင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံ ဆက်သွယ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
Customer လိုချင်သည့်ကို သင့်အဖွဲ့မှ လျှင်မြန်စွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ထားသော မှတ်တမ်းများ၊ ယခင်အရောင်းစာရင်းများ၊ ပေးခဲ့ဖူးသော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆွဲထားပေးသော အစီအစဉ်များ၊ နှင့် အခြားဆက်စပ်လျက်ရှိသော အချက်အလက်များကို CRM software ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်အဖွဲ့မှ customer ကို ဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ chat အပြင် တွေ့ဆုံထားသည့် နေရာများအထိ GPS ဖြင့် Check-in ဝင်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ပါသည်။
CRM software မှ သင့်အဖွဲ့ကို SLA( ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးခြင်း)အတွက်ပါ ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အဖွဲ့အနေဖြင့် နောက်လာမည့် ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရသည့်အတိုင်း အသိပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
သင် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် Mobile CRM ဆော့ဝဲဖြင့် သင့် customer များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို အလိုရှိတိုင်း သင့် customer များအတွက် အသင့်အနေအထားဖြင့် ရှိနေပြီး ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်ပါ။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် နှင့် လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသောအဖွဲ့
customer ၏ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်ဆည်းရန် Call Center မှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအား လက်ခံပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ကို အလွယ်တကူ ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
CRM ဆော့ဖ်ဝဲသည် customerများထံ ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်စေခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တောင်းဆိုမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း customer များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
အရောင်းစာရင်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များကို မှန်ကန်စွာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရောင်းချမှု နှင့် CRM အသင်းတွင် ဖြစ်နေသည်များကို သင် သိနိုင်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်များကို အွန်လိုင်းစနစ်မှ တဆင့် ဆွေးနွေး၊ တာဝန်ချ ပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းဆက်ပြောစရာမလိုပါ။ Facebook ကဲ့သို့ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် အလားတူ၊ SignifyCRM ဆော့ဖ်ဝဲသည် အသင်းအဖွဲ့အဝင်များကို အောက်ပါကဲ့သို့ အရေးကြီးနေ့ရပ်များတွင် အလိုအလျောက်အသိပေးပါလိမ့်မည်။
o customer anniversary (စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်)
o မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် ရက်စွဲများ
o ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ချိန်းဆိုချက်နေ့စွဲများ
o customer မွေးနေ့
CRM ဆော့ဖ်ဝဲထဲတွင် သင့်အဖွဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်ချက်များ (customer ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေးစွမ်းနိုင်ရန်)အတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီးcustomer များဆီသို့ email မှတဆင့် အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကို ပေးပို့ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။
Dashboard နှင့် Report များ
သင့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော Dashboard နှင့် Report များကို ဖန်တီးပါ။
o Chart များ: Funnel၊ Pie၊ Vertical Bar၊ Horizontal Bar.
o Chart များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ဥပမာ၊ အရောင်းဦးတည်ချက် နှင့် အမှန်တကယ်ရလဒ
o Report များ: အကျဉ်းချုပ်၊ အသေးစိတ်နှင့်အတူ တွက်ချက်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်အပိုင်းများ
o သင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ပေးမည့် Report အချိန်သက်မှတ်ပေးခြင်း နှင့် email သို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း
အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် ဝင်ရောက်နိုင်သူအား ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ SignifyCRM သည် မတူညီသော လုံခြုံရေး အတိုင်းအတာများကို အခြေခံမှနေပြီး အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံသည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
o အသုံးပြုသူ password
o လုံခြုံရေး တာဝန်ယူခြင်း
o အချက်အလက် ကူးယူခြင်း လုံခြုံရေး
o ပိတ်ပင်ထားသော တည်နေရာ
သင့်ရဲ့ ရှိနေပြီးသာ LDAP နှင့် ပေါင်းစပ်ရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုများပြားသော အချက်အလက်များအတွက် Signify အသင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုက်ပါ။
အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်များအတွက် Screen ပြသမှုကို ထိန်းညှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ သဘောကျမှုပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်ပုံစံများကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်သလို application သည်လည်း အသုံးပြုရ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ အသုံးပြုသူသည် Ad-Hoc တင်ပြချက်များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိမိတို့ လိုအပ်သလို တင်ပြချက်များကို ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။ အသုံးပြုသူသည် အလုပ်လုပ်ဆောင်သည့်ပုံစံကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့၏ အရေးကြီး event များအရ အသိပေးပြီး နှိုးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အကြောင်း report များကို လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Email မှတဆင့် အရောင်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု report များကို အလိုအလျောက်ဖန်တီးပြီး ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ အချိန်မှန် အချက်အလက်များအားလုံးနှင့်အတူ၊ report များကို သင်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတိုင်း ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ သောကြာနေ့ည ၈နာရီတွင် သို့မဟုတ် တင်္နလာနေ့ည ၉နာရီတွင်
customer နှင့် ဆက်ဆံရေး စီမံခန့်ခွဲမှုသည် customer တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို လိုအပ်ချက်များအရ စီမံပြီး အသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
“CRM ကောင်းတစ်ခုသည် account အချက်အလက် တစ်ခုချင်းစီ၏ အသုံးပြုမှုမှ တဆင့် သင့်အသင်းအဖွဲ့ဝင်များမှ အကောင်းဆုံးသော အချိန်မှန် customer service အား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စေပါသည်။ တန်ဖိုးထားရသော customer တစ်ဦးချင်းစီအကြောင်းကို သိသည့်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်ပြီး၊ သင့်အသင်းသည် အရောင်းအဝယ်ကမ်းလှမ်းမှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ CRM သည် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးအမြတ်ရနိုင်မှု နှင့် customer များလာအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း တို့အတွက် ရိုးရှင်းသော အဓိက မောင်းနှင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။” ဟု Northwestern တက္ကသိုလ်မှ Marketing ဘာသာရပ် ၏ ပါမောက္ခ Phillp Kolter က ပြောခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု ကောင်းစွာ လည်ပတ်ရန်အတွက်၊ အရောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ဈေးကွက်တွင်ဦးတည်ခြင်းတို့ကို အခက်အခဲမရှိဘဲcustomer တစ်ဦးချင်း၏ အချက်အလက်များအပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သွားတတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတု့ိသည် တူညီသော ပန်းတိုင်နှစ်ခုဆီသို့ အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ အမြတ်အစွန်းနှင့် customer စိတ်ကျေနပ်မှု တိုးလာစေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူများ၏ စမ်းတမ်းများမှ၊ Web နှင့် Mobile CRM Application အတွက် ကောင်းကျိုးများမှာ:
1. ရုံးတွင်းအသင်း၊၊ sale အသင်း နှင့် service အသင်းများသည် customer မှတ်တမ်းများကို ရယူနိုင်ပြီး မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက် (၈၀%) ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
2. customer များဆီသို့ သွားရောက်သောအခါတွင် အချက်အလက်များကို (၇၀%) အဆင်ပြေစွာ စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
3. လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှ ဝန်ထမ်းနှင့် ရုံးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းများအကြားတွင် သက်ရောက်မှုရှိသော ဆက်သွယ်ခြင်း (၄၀%)
SignifyCRM အသုံးပြုသူများသည် အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများ ရယူနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုကြပါတယ်။
အမြတ်အစွန်းများကို အကောင်းဆုံးသော လက်တွေ့ကျသည့် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စနစ်ရှိခြင်းဖြင့် တိုးပွားနိုင်ခဲ့ခြင်း
အလုပ်စွမ်းအားကို customer တစ်‌‌‌ယောက် အမြင်၊ အချိန်မှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစီးဆင်းမှုနှင့် တင်ပြချက်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ရှိခြင်းဖြင့် တိုးပွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အရောင်းခန့်မှန်းခြေ တိကျမှုတွင် တိုးလာသည့်အတွက် ထုတ်လုပ်မှု နှင့် customer ထံသိုပို့ဆောင်မှုတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အရောင်းဝန်ထမ်းနှင့် ၁၅မိနစ်စကားပြောခြင်းဖြင့် သင့်အား စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အကြံဉာဏ်များကို ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Customer Relationship Management အတွက် SignifyCRM
customer နှင့် ဆက်ဆံရေး စီမံမှု ဆော့ဖ်ဝဲသည် အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းအတွက်အရောင်းအဝယ်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး customer များ မျှော်မှန်းထားသလောက် စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိမရှိကို အသေအချာ သိနိုင်ပါသည်။
CRM ဆော့ဖ်ဝဲ ရှိထားခြင်းသည် မိမိတို့အမှတ်တံဆိပ်ကို တိုးတက်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအတွက် အရေးပါသော အသုံးချမှုတစ်ခုဟု ကျယ်ပြန့်စွာ အသိအမှတ်ပြုထားကြပါသည်။
✓ customer များကို ကတိပေးထားသည့် အရည်အသွေးအတိုင်း အသေအချာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
✓ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း နှင့် customer များဆီမှ ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုများကို ရရှိနိုင်ခြင်း
✓ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးခြင်း: customer များ ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် Web Portal နှင့် Mobile app.အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
o Profile အပိုင်း၊ အထူးခံစားခွင့်များ၊ campaign ကမ်းလှမ်းမှုများ နှင့် ပြီးခဲ့သော အရောင်းများ နှင ဝန်ဆောင်မှု အသွားအလာဖြတ်သန်းမှုများ၊ ဆက်သွယ်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ:
o ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ၊ အီးမေးလ်၊ ဓါတ်ပုံနှင့် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် စစ်ဆေးမှု
o အသင်း ပြက္ခဒိန်
o ဆက်သွယ်အသွယ် တင်ပြချက် – နေ့၊ သီတင်းပတ်၊ လ
o customer ၏ ကိစ္စရပ်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်များဆီသို့ ကိစ္စရပ်များကို ပို့ပေးခြင်း
o တုံ့ပြန်လာသည့်အချိန် နှင့် အချိန်ပြည့်မည့် ရက်များကို SLA အရ ကြည့်ရှုှု စီမံနိုင်ခြင်း၊
o Call Center system နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်း
o အလုပ် အဝင်အထွက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဖမ်းယူထားနိုင်ခြင်း
o ဗဟုသုတ စီမံမှု (KM) မော်ဂျူးသည် KM အကြောင်းအရာ (Producut datasheet, ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ Form များ၊ FAQ နှင့် လုပ်ဆောင်နည်း) များကို ထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက် သင့်အသင်းသည် customer အား email မှတဆင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
o သင့် ကုမ္ပဏီ Website သို့မဟုတ် mobile application နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် API
စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းသည် customer ၏ တုံ့ပြန်ချက်များကို လိုအပ်ချက်တစ်ခုခြင်းစီတွင် မှတ်သားထားနိုင်ပါသည်။
o အသုံးပြုသူ သတ်မှတ်ပေးသော စစ်တမ်းပုံစံ
o ဦးဆောင်မှု၊ အရောင်းအမှာစာ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှာစာ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော စစ်တမ်းများ
o ကမ်စတန်မာများဆီသို့ အီးမေးလ်မှတဆင့် စစ်တမ်းlink များ ပေးပို့ခြင်း၊ ကမ်စတန်မာသည် link ကိုနှိပ်ပြီး အွန်လိုင်းစစ်တမ်းများကို ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။